‘हेटौंडाका होटलमा काम गर्ने महिलामाथि कुनै हिंसा भएको छैन’
मकवानपुर जिल्लामा अहिले होटल तथा रेष्टुरेन्टको सङख्या बढ्दो क्रममा छ । हेटौंडामा रहेका साना तथा ठूला होटल एवम् रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने महिलाहरुको अवस्था भने खासै राम्रो छैन । साना होटलहरुमा काम गर्ने महिलाहरुलाइ तलब नदिने, शारिरिक, मानसिक यातना दिने गरेको पनि सुन्ने गरिएको छ । मकवानपुरका होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पनि महिलाहरु कार्यरत छन्...
नेपाल सरकारले देशको विभिन्न जिल्लाहरुमा यही असार १५ गतेदेखि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम ल्याएको छ । स्वास्थ्य विमा गर्दा २५ सय रुपैया लाग्ने र यही रकमले परिवारको ५ जनासम्म सदस्यको स्वास्थ्य विमा गर्न सकिने बताइएको छ । विमा कार्यक्रम अहिले मकवानपुर लगायत १२ स्थानमा सञ्चालनमा छ । के हो त स्वास्थ्य विमा ? अनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा...
बालश्रममुक्त पहिलो शहर हेटौंडा भन्न पाउँदा हामीलाई गर्व लाग्नेछ : भीमप्रसाद तिमल्सिना
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका नेपालकै पहिलो निकृष्ट बालश्रम मुक्त शहर बनाउने तयारी भइरहेको छ । अब हेटौंडाका कुनै पनि ठाउँमा, कार्यस्थलमा निकृष्ट बाल श्रम प्रयोग भएको देखिनेछैन । यही असार महिनाको २० गतेभित्र मकवानपुरको हेटौंडाले औपचारिक रुपमै नेपालको पहिलो बालश्रम मुक्त शहरको पहिचान पाउँदैछ । यसका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।...
अब हामीलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्ने जनताले हो : राजकुमार मल्ल
बीसवर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मकवानपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधी आएका छन् । राक्सीराङ् गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजकुमार मल्ल निर्वाचित भए । उनी अहिले गाउँपालिकाको विभिन्न कार्यमा व्यस्त छन् । उनीसंग के के छन् कार्ययोजना ? समग्रमा गाउँ विकासका कार्य कसरी हुदैछ ? गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लसंग...
नारायणी यातायात व्यवसायी संघ देशकै सबैभन्दा ठूलो यातायात व्यवसायीको संस्था मानिन्छ । मकवानपुरको हेटौंडामा मुख्य कार्यालय रहेको संघको नेतृत्व अहिले बद्रीप्रसाद चौलागाईंले सम्हालिरहेका छन् । संघको विभिन्न कार्यमा उनी प्रायः व्यस्त छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव पछि अब दोस्रो चरणको चुनावको तयारी भइरहेको छ । चुनावप्रति...
औषधि व्यवसायीलाई कुनै समस्या परेमा मलाई भन्नुस् : सुधीर दाहाल
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ मकवानपुरको अध्यक्षमा सुधीर दाहाल निर्वाचित भएका छन् । औषधीले मानव जीवनसंग महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । औषधि व्यवसायको मकवानपुरमा अवस्था कस्तो छ ? व्यवसायिक हकहितका लागि औषधि व्यवसायी संघको योजना चाँही कस्तो छ ? मध्यस्थता सहकर्मी रामहरी गौतमले संघ अध्यक्ष दाहालसंग कुराकानी गरेका छन् । १.औषधी व्यवसायी...
भीमफेदी गाउँपालिकामा सबैको मन जित्ने काम गरेर अघि बढ्नेछौं : पार्वती राना
अनेमसंघ मकवानपुरकी अध्यक्ष पार्वती राना मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । महिला अधिकारकर्मीका रुपमा मकवानपुरमा परिचित नेतृ रानासंग उपाध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि के छन् योजना ? अब गाउँपालिकाको लागि उनको भूमिका कस्तो रहनेछ ? उपाध्यक्षमा निर्वाचित उनको जितले महिलाका लागि के अर्थ राख्ला यसै विषयमा...
भ्यागुतो जति मोटाएपनि धार्नी नपुगेजस्तै काङ्ग्रेस-माओवादी तालमेलले एमालेलाई केही फरक पार्दैन : उपमेयर उम्मेदवार मीना लामा
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनितिक दल नेता कार्यकर्ताको व्यस्तता थप बढेको छ । सबै दल आफूले चुनाव जित्ने दाबी गरिरहेका छन् । स्थानीय चुनावमा पार्टीले प्रमुख वा उप प्रमुखमध्ये एउटा पदमा महिलालाई अनिवार्य रुपमा उम्मेदवार बनाउँनुपर्ने नियम छ । तर मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गरेका काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै...
‘खोरियामा कोरियाको प्रणाली विकास गर्ने योजना छ ’
कृष्णप्रसाद बजगाईंले मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा वडा अध्यक्षका लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । राजनीतिभन्दा पनि सामाजिक अभियन्ताका रुपमा चिनिएका २७ वर्षिय बजगाईंले स्नातक सम्मको अध्ययन गरेका छन् । गाउँमा यूवाहरुको अग्रसरतामा स्थापित नव चेतनशील समाजको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर सामाजिक अभियानमा लागेका...